FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA MASO - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika maso
Alika mifangaro mifangaro i Basset Hound / Labrador Retriever mifangaro
'Ity no Ollie. Izy dia mifangaro Basset Hound / Labrador Retriever. Samy ray aman-dreny ny ray aman-drenin'i Ollie ary samy tsy tian'ny tompony hifangaro ilay izy ka nomenay trano izy. Alika be fitiavana izy ary mahafinaritra amin'ny manodidina ny olona, ​​indrindra ireo be taona sy ankizy. Malemy fanahy be izy rehefa mila sy mpiasa an-tsitrapo any amin'ny trano fitaizana be antitra toy ny biby fiompy amin'ny alika kodia. Etsy ankilany, izy koa dia tena mafy loha ary tia zavatra misy amin'ny fe-potoam-piasany . Midika izany fa raha tianao hiditra ao anatiny izy dia hiandry mandra-pahafatiny izy, raha miantso ny anarany ianao dia hanao zavatra toa izy tsy eto aminao. Tiany ny rano fa tsy mpilomano be amin'ny tongony kelikely. Tiany ny mamerina !! Manana orona be izy ary afaka mamofona tanteraka ny zava-drehetra. Tiany ny mandeha an-tongotra nefa tiany ihany koa ny mihazakazaka eo an-tokontany. Ny haavon'ny heriny dia tsy avo toy ny Lab, fa mitovy amin'ny Basset Hound. Izy koa manana hodi-kazo basset! Tena entanin'ny sakafo izy raha resaka fiofanana, fomba iray ahazoanao antoka fa hihaino anao izy. Tena tsy manana fahazaran-dratsy i Ollie, izy no alika tsara indrindra nananako ary azoko atao ny manoro ny fangarony azy ho an'izay mitady namana tsara ho azy ireo na biby hafa . '
Tsy alika madio ny maso ivoho. Lakroa misy eo anelanelan'ny Basset Hound ary ny Labrador retriever . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Ollie ny Masoivoho tokony ho 2 taona teo ho eo
sary alika any an-tendrombohitra lehibe kokoa
Ollie ny maso ivoho
'Ollie toy ny alika kely 9 (havia) ary Ollie toy ny alika 11 volana (ankavanana) - ity misy sarin'i alika Ollie. Izy dia Basset Hound / Labrador retriever mifangaro. Nahita an'i Ollie aho indray andro, ilay fofom-badiko, indray andro tao amin'ny fivarotana biby kely. Nisy nandroaka azy sy ny rahalahiny io maraina io satria tsy tian'izy ireo ny alika mifangaro. Tsy afaka nanohitra azy izahay. Ollie no lehibe kokoa tamin'izy roa lahy ary mailaka izy ary nilamina tsara. Rehefa noraisiko izy dia nisento teo an-trotroako. Nody izahay mba hisaintsaina an'io ary ny ampitso dia nakarinay izy. Natsangana ny rahalahiny ny ampitso. 2 volana i Ollie rehefa nahita azy izahay ary efa ho 11 volana izao. Izy no fampifangaroana tsara indrindra amin'ny Basset Hound sy Lab izay efa hitako. Tsara dia tsara amin'ny ankizy sy biby hafa izy, misy zanak'anabaviko vitsivitsy misy taona 5 ka hatramin'ny 11 taona ary izy no naman'izy ireo akaiky indrindra rehefa entinay mody izy (PA). Mifankahazo tsara amin'ny saka malalako roa izy, na dia manenjika sy mihaza azy manerana ny trano aza izy nefa tsy manisy ratsy azy ireo velively. Manana orona aminy izay maimbo tanteraka ny zava-drehetra. Milanja 47 pounds eo ho eo izy ary ny halavany dia mankasitraka ny an'ny Basset Hound. Tena mafy loha i Ollie indraindray. Tsy afaka mitondra azy any ivelany isika raha tsy misy tadiny satria misy fofony izy ary mihodina amin'ny lalana mifanohitra aminy, fa raha any an-tsaha isika na amin'ny faritra midadasika dia mirona hijanona akaiky antsika izy. Nanomboka mitsako izy tato ho ato, amin'ny zavatra tsara rehetra azony vava nefa maranitra izy ka noho ny fananarana kely dia tokony ho tsara izy. Tsy dia ratsy loatra ny fampiofanana momba ny vilany raha tsy hoe tsy dia be vava izy rehefa te hivoaka. Nanapa-kevitra ny hametraka lakolosy teo am-baravarana izahay ary izao dia ampanenoiny isaky ny mandeha mivoaka izy. '
Brody the Basset Hound sy Labrador mifangaro amin'ny 8 volana
miampita eo anelanelan'ny spaniel sy poodle
Brody the Basset Hound sy Labrador dia mifangaro amin'ny 2 taona eo ho eo matory eo amin'ny seza
Brody the Basset Hound sy Labrador dia mifangaro toy ny alika kely
'Ity no Kash zanako Basset Hound 8 volana sy Labrador Retriever mifangaro. Ra feno ny reniny Basset ary ny dadany dia a sokola Lab . Feno angovo toa ny Lab izy nefa mikorontana toa ny Basset. Tiany ny ankizy sy ny fiheverana. Faly izy fa manana taolana tsara hohanina ary misy olona manery azy ao aorian'ny sofiny lehibe lava. '
Rocky ny masoivoho amin'ny 2 taona— 'Rocky dia antsasaky ny Basset Hound antsasaky Labrador. Alika mahafinaritra izy, be reny, tia saka , ary ny olona, mandinika izay rehetra tsy nohomboana tamin'ny tany ary tia nihira. '
fisoratana anarana purebred amerikana avaratra vs akc
Jake the Bureau amin'ny taona 2 eny amoron-dranomasina— 'Ity i Jake zanakay lahy tena tia, mahafatifaty, tsara tarehy! Jake dia tia mihaza, manjono ary milalao amin'ny kilalao. Noraisinay i Jake tao amin'ny toeram-pialokalofanay teo an-toerana tamin'ny faha-10 taonany. Izy no lasa mpinamana akaiky indrindra sy mpiara-mitory aminy. Tianay ianao zazalahy kely! '
Jake ilay masoivoho tamin'ny faha-2 taonany nanjono
Sarin'ny masoivoho 1
lisitry ny karazana alika akc
omby antsasak'adin'ny mpiady totohondry
jack russell terrier pomeranian afangaro alika kely
sarin'alika amin'ny alika
karazana tertera mainty sy tan